Sanbalooshe oo soo jeediyay talooyin ku saabsan Ammaanka Muqdisho & Sida ugu Fudud ee looga bixi karo caqabadaha Amni ee taagan | allsaaxo online
Sanbalooshe oo soo jeediyay talooyin ku saabsan Ammaanka Muqdisho & Sida ugu Fudud ee looga bixi karo caqabadaha Amni ee taagan
Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad suggida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalooshe ayaa soo jeediyay in wax ka badal lagu sameeyo Ammaanka Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in Magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay dowladdii dhexe ay sameysay Kobac ballaaran,islamarkaana ay dhinacyo badan u fiday ayna adag tahay in Ammaankeeda laga suggo hal meel.
Waxaa uu xusay in ay muhiim tahay kordhinta Koontaroolada gaadiidka lagu baaro, iyadoo ciidamada la siinaayo qalab badan oo amniga ay ku sugaan.
Sanbaloolshe oo la hadlay VOA, ayaa sheegay Muqdisho inay ballaaratay oo ay kobacday, sidaasi awgeedna muhiim inay tahay sameynta qorshe amni oo Magaaladan loo dajiyo, maadaama Shabaab xilli kasta isku dayaan fulinta falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida Somaliya Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa sheegay inay muhiim tahay kordhinta Koontaroolada gaadiidka lagu baaro, iyadoo ciidamada la siinaayo qalab badan oo amniga ay ku sugaan.